Alakamisy 03 Jiona 2021 – FJKM
Alakamisy 03 Jiona 2021
Jesoa Kristy : Andriamanitra
Ny asa fanasitranana sy famonjena nataon’i Jesoa dia nahatsara laza Azy teo amin’ny mpiara-monina taminy . Tsy nisy aretina na olana samihafa tokoa mantsy no entina teo amin’i Jesoa ka tsy nahitany vahaolana . Jesoa tokoa dia Andriamanitra .
Andriamanitra azon’ny olona rehetra nanana olana natonina i Jesoa . Ilay mpanapaka maty zanaka nanatona an’i Jesoa , ilay vehivavy narary roa ambin’ny folo taona nanatona an’i Jesoa . Andriamanitra akaikin’izay manana olana rehetra i Jesoa . Andriamanitra nanaiky natonin’ny olona rehetra rahateo Izy. Ary raha ny marina , Izy mihitsy aloha no efa nanatona ny olona rehetra raha nidina avy tany an-danitra , mba ho mora amin’ny olona rehetra , indrindra ireo izay manana ilana ny manatona Azy . Mandraka ankehitriny dia mbola akaikin’ny olona rehetra Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy .
2-Manasitrana rehefa mahita finoana (and22)
Rehefa hitan’i Jesoa ny finoan’ilay vehivavy narary an-taona maro dia nositraniny izy . Tonga niasa avy hatrany i Jesoa rehefa mahita finoana ao amin’ny olona . Io finoana io no manosika sy manery Azy hamaha ny olan’ny olona rehetra manatona Azy tsara ny manatona an’i Jesoa . Tsara ny ho eo akaikiny fa tena zava-dehibe ary zavatra takian’i Jesoa ny finoana Azy . Ny hoe : mino Azy dia manaiky tsy am-pisalasalana fa hainy ny zavatra rehetra , indrindra ny mamonjy sy manafaka amin’ny geja samihafa . Zava-poana araka izany ny fanatonana an’i Jesoa kanefa tsy arahim-pinoana . Ekeo ho Andriamanitra afaka manala amin’ny geja samihafa i Jesoa .
Ahoana ny fomba tsotra hanatonana an’i Jesoa?